Danzen (ဒန်ဇန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Danzen (ဒန်ဇန်)
Danzen (ဒန်ဇန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Danzen (ဒန်ဇန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Danzen ကို ခွဲစိတ်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးရောင်ရမ်းခြင်း နှင့်အောက်ပါရောဂါများတွင်အသုံးပြုကြသည်။
– သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ခြင်း (epididymitis)
-အဆုတ်တွင် အနာဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
Danzen ကိုအောက်ဖော်ပြပါရောဂါများတွင် သလိပ်လုံလောက်စွာ မထွက်သောအခြေအနေမျိုး၌ အသုံးပြုသည်။
-ပန်းနာရင်ကျပ် နှင့် မေ့ဆေးသုံးပြီးနောက် သလိပ် လုံလောက်စွာ မထွက်ခြင်း
Dozen ကို အခြားနေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များပိုမို သိရှိလိုပါက သင့် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် မေးမြန်းပါ။
Danzen ကိုအစားစားပြီးမှသောက်သုံးရမည်။ ကြိတ်ချေခြင်း၊ ချိုးဖဲ့ခြင်း၊ ဝါးစားခြင်းများ မပြုရ။ ရေနှင့်မြိုချ၍သာ သောက်သုံးရပါမည်။ မေးခွန်းများရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Danzen ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Danzen ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Danzen ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Danzen ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Danzen ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
-မိမိသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်နေပါက ဆေးအသုံးမပြုမီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရမည်။
-အခြားသော ဆေးများ (တိုင်းရင်းဆေး၊ ဆေးညွှန်းမပါဘဲ ဆေးဆိုင်တွင် ဝယ်လို့ရသောဆေး) သောက်သုံးနေပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေး ရမည်။
-Danzen တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုများ (သို့) အခြားဆေးများနဲ့ဓါတ်မတည့်မှုများ ရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရမည်။
-အခြားသော ဓါတ်မတည့်မှုများ ဥပမာ- အစားအသောက်၊ ဆိုးဆေး၊ တာရှည်ခံဆေး၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုများ သတိထားရမည်။
-အခြားသော ရောဂါ အခံများရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Danzen (ဒန်ဇန်)
-ဆေးဓါတ်မတည့်မှု ကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြား ပြဿနာ Steven-Johnson syndrome
-သေစေနိုင်လောက်သော ပြင်းထန်အရေပြား ဝေဒနာ (Toxic Epidermal Necrolysis)
– သေစေနိုင်လောက်သည့် ဆေးဓါတ်မတည့်မှုများ
အထက်ပါ ဆိုးကျိုးများကို လူတိုင်း ခံစားရမည် မဟုတ်ပါ။ အထက်ဖော်ပြထားသည်တွင် မပါသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ကြုံရနိုင်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနဲ့ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန် နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Danzen (ဒန်ဇန်)
Danzen ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Danzen နဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
-Danzen ကို aspirin (သွေးကျဲဆေး)၊ clopidogrel (သွေးကျဲဆေး)၊
Diclofenac (Voltaren, Cataflam) (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး)၊ ibuprofen (Advil, Motrin ) (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး)၊ naproxen (Anaprox, Naprosyn) (အရောင်ကျဆေး)၊ dalteparin (Fragmin) (သွေးကျဲဆေး)၊ enoxaparin (Lovenox)
(သွေးကျဲဆေး)၊ heparin (သွေးကျဲဆေး)၊ warfarin(Coumadin) (သွေးကျဲဆေး)။
Dazen သည ်ဖော်ပြပါ ဆေးများနဲ့တွဲသုံးလျှင် ေသွေးခဲခြင်းကိုလျော့ကျစေပြီး သွေးခြည်ဥခြင်း နှင့် သွေးထွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများစေပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Danzen (ဒန်ဇန်)
Danzen က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Danzen (ဒန်ဇန်)
Danzen (Serratiopeptidase) ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ ဓါတ်ပြုနိုင်သော အခြေအနေများမှာ
-သွေးကျဲဆေးသောက်သုံးနေသော လူနာများ ဖြစ်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Danzen (ဒန်ဇန်)
Dazen ကို တစ်နေ့သုံးကြိမ်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Danzen (ဒန်ဇန်)
Danzen ကို 5mg ဆေးလုံးပုံစံနှင့် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
မိမိတွင်ရှိသောဆေးစာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ကိုယ့်ဘာသာဝယ်သောက်နေသောဆေးများ တစ်ပါတည်းယူဆောင်သွားရန် အရေးကြီးပါသည် ။
Danzen ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။